DEGDEG: Maraakiib shidaal oo la sheegay inay qaraxyo ku qabsadeen Gacanka Cumaan. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
DEGDEG: Maraakiib shidaal oo la sheegay inay qaraxyo ku qabsadeen Gacanka Cumaan.
Labo Markab, nooca Booyadlaha shidaalka oo waa weyn ayaa la sheegay inay qaraxyo ku qabsadeen Badda Cummaan ama Gacanka Cumaan.(Gulf of Oman).
Telefishinka Al-caalam ee dalka Iiraan waxa uu ka soo xigtay ilo ku sugan gudaha dalka Cummaan inay sheegeen inay saakayto 2 qaraxyo waa weyn ka maqleen Gacanka Cummaan.
Warar ayaa sheegaya inay qaraxyadaasi sababeen weerar lagu qadaay Labada Markab ee Booyadlaha shidaalka ah.
Badmaaxiinta la socotay Labada Markab ayaa la sheegay inay dirsadeen Gurmad, kadib, markii ay la kulmeen qaraxyadaasi, oo la sheegay inuu kala dhaceen Abaarihii 06:12 daqiiqo iyo 7-dii aroornimo ee maanta oo Khamiis ah.
Wakaalladda Wararka REUTERS waxay ilo dhanka Maraakiibta iyo Ganacsiga ka soo xigteen in Labada Markab ee la weeraray lagu kala magacaabo Front Altair oo watay calanka Jersiiradaha The Marshal Islands iyo Kokuka oo watay Calanka dalka Panama.
Shaqaalihii la socotay Maraakiibtaasi waxaa la sheegay in la daad-gureeyey, isla markaana ay bad-qabaan.
Hadal-qoraal oo ka so obaxay Shirkadda Maaraynat Maraakiibta ee BSM Ship Management ee dalka sinagpore ayaa lagu sheegay in Markabka Kokuka laga daad-gureeyey 21-kii Badmaax ee la socotay, kadib, markii uu burbur soo gaaray.
Markabka waxa uu ku sugan yahay meel 70 nautical miles ka baxsan Dekedda Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta ama qiyaasta kale waxa uu 14 nautical miles u jiraa xeebta dalka Iiraan.
Sidoo kale, dhamaan shaqaalihii la socday Markabka kale ee Front Altair waxaa la sheegay in la soo badbaadiyey.
Deegaan-baddeedka Maraakiibtaasi lagula begsaday qaraxyada ayaa la sheegay inay u dhowdahay Gacanka Hormuz ee Istaraatijiyadda ha oo ay ka gudbaan saddex duleel ooh al (one-third) ee Maraakiibta Shidaalka.
Guutadda 5-aad ee Ciiddanka Badda Maraykanka ee fadhigoodu yahay dalka Baxrayn ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka REUTERS inay gurmad u fidiyeen Maraakiibtaasi, kadib, markii ay heleen 2 wicitaan oo Qeylo-dhaan ahaa.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxyada maanta lala beegsaday maraakiibtaasi ayaa waxay ku soo beegmaysaa, kadib, markii bishii hore ee May 12-dii dhowr markab qaraxyo lagula beegsaday meel ka baxsan Xeebaha dalka Imaaraaadka Carabta.
Aadan Bare Ducaale oo baaq u diray Madaxweynayaasha Somalia iyo Kenya
(SAWIRO): Maxaa ku soo kordhay Qaraxyadii Maraakiibta shidaalka iyo Iiraan iyo Cummaan oo ka hadlay